Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:25 PM
စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ၊ ခေါင်းပူစရာတွေ ရေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ပြန်လည် အနားယူဖို့ အတွက် ရုပ်ရှင်တစ်ကား ညွှန်းပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကားကို ကြည့်ပြီးတာတော့ တော်တော် ကြာပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းက ၀ိုးတ၀ါးပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ တကယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းပါပဲ။ ဇာတ်ကားနာမည်က “ Rendition ” ပါ။
ဇာတ်လမ်းက၀ိုးတ၀ါးဆို။ ပြောသွားတာအတိကျဘဲ။း)
ကြည့်ချင်တယ်။လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်။ မတွေ့ ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
ဘန်ကောက် မသိရင် မဲဆောက်ကောသိလားဗျး) အမြည်းပဲစားသွားတယ် အရသာကတယ်ဂွဒ်သကိုးးးး
အဲဒီ့ဇာတ်ကား အခုလေးတင်ကြည့်ပြီးတာဗျ. TV ကလာတာ. ချက်ချင်းပဲ ဒါ ကိုဆိုးသွမ်းရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကားလေးဆိုပြီး အပြေးပြန်လာဖတ်ရင်း ကော်မန့်ပွတ်သွားတာ.
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲဗျာ. အမေအိုကြီးရဲ့ They are just children.... ဆိုပြီး အသံတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အခန်းလေးမှာ ကျွန်တော် မျက်ရည်တောင်ဝဲသွားတယ်.
နောင်လည်း ရေးပါဦး၊ ညွှန်းပါဦးဗျ..